Pipeline Ahịa B2B: Turngbanye Clicks na Ndị Ahịa | Martech Zone
Kedu ihe bụ pipeline ahịa? Na azụmaahịa azụmaahịa (B2B) na azụmaahịa maka ndị ahịa (B2C) ụwa, ụlọ ọrụ ire ahịa na-arụ ọrụ ịkọpụta ọnụọgụ ndị ndu ha na-anwa ịtụgharị ugbu a n'ime ndị ahịa. Nke a na-enye ha amụma gbasara ma ha ga-emezu ebumnuche nke nzukọ dịka ọ gbasara inweta nnabata na uru. Ọ na-enyekwa ngalaba azụmaahịa echiche nke ịdị ngwa iji mara ma ha na-ebu ndị ọbịa zuru oke ịbanye na ndu.
Ọtụtụ ụlọ ọrụ B2B na-arụ ọrụ na mpaghara mmepụta ihe nwere ogologo oge mgbatị na-adọrọ adọrọ. Yabụ, kedu ka isi mara mgbe ndu dị njikere ịzụta? Arụ Ọrụ Mgbasa Ozi Azụmaahịa ActiveConversion na-egosi gị otu ị ga - esi jiri akpaaka azụmaahịa iji mee ka ndị ọbịa webụsaịtị bụrụ ndị ahịa. Soro usoro a na-agbago usoro iji hụ otu ị ga - esi achọpụta ebe ụzọ sitere na mgbe ha dị njikere. Atingmezi usoro a na-enye gị ohere ilekwasị anya n'ihe kachasị mkpa - ịmepụta ahịa!
N'ile anya na njem nke na-eduga na-esite na pipeline ahịa (ma na-atụle oge ọ bụla) bụ mmega ahụ dị irè maka ụlọ ọrụ gafere na nke a bụ ihe ọmụma dị egwu nke na-eme nke ahụ. Akụrụngwa ịzụ ahịa ahịa nke oge a na usoro njikwa ndụ na-enye ụdị nghọta ndị a ma nwee ike ịme ka ọ bụrụ na ndu ga-aga n'ihu na ọkwa ọzọ.
Ntughari Active na-enyere aka ịtụle usoro ndu gị n'ịzụ ahịa iji bulie mbọ ịre ahịa yana otu esi azụ ahịa azụmaahịa gị.
Tags: nọ n'ọrụ ntụgharịmbugharị mbugharịpip2 bXNUMXbọkpọkọ ahịa b2bịde blọgụnsomechie ahịadata.comozi ịntanetịemail Marketingna-ekpo ọkụ na-edugachọpụta ụlọ ọrụchọpụta ụlọ ọrụmata nduọrụ ibunjirimara njirimarandu akaraLinkedInmgbasa ozi n'ịntanetịndekọ ntanetịekwentịihe ngosiresearchakpaaka ahịapipeline ahịasearch enginesnjirimara ndị ọbịawebinars